Ogeeyyii fayyaa: Gaaffiin keenya ammas nuuf hin deebine - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Office of Prime Minister
Goodayyaa suuraa Ministirri Muummee Abiy Ahmad ogeeyyii fayyaa mariisisan
Barattoonni muummee barnootaa fayyaa baratan torbanoota darban keessa waa'ee mirga isaanii, kaffaltii fi imaammata fayyaa biyyattiirratti hiriira nagaa bahuun gaaffii kaasaa turan.
Yuuniversitii Jimmaa, Asallaa, Gondar akkasumas Hospitaala Phaawuloositti barattoonni hiriira bahuun gaaffilee gaafachaa turan.
Ergasiis Ministirri Fayyaa biyyattii barattoota muummee barnoota fayyaa waliin mariyachuun rakkoowwan jiran akka furu waadaa galee ture.
Guyyaa kaleessaa Ministirri Muummee Abiy Ahmad barattoota muummee barnoota fayyaa hordofan 3000 ta'an waliin mariyachuu Waajjirri Ministira Muummee ibseera.
Ogeeyyii waliin mariyachuun imaammata fayyaa fooyyessuuf hojii bu'uuraati kan jedhan Ministirri Muummee Abiy Ahmad, waa'ee kaffaltiitiin walqabatee daddaaqamni diinagdee bulchiinsa duraaniirraa dhaalan akka isaan qore kaasan.
''Gaaffii diinagdeen walqabatu deebisuuf hunduu ga'ee irraa eegamu bahuu qaba malee, hunduu gaafataa taanaan madaallii eegnee deemuun nu rakkisa.'' jedhan.
Goodayyaa suuraa Ogeeyyiin fayyaa gaaffiin keenya guutuutti nuuf hin deebine jedhu
Marii kaleessa ogeeyyii fayyaa waliin irratti yaada kan nuuf kenne hirmaataan marichaa Dr. Sifeessaan ''Gaaffii keenya dhagahani nu mariisisuun waan dansaa ta'ee garuu ammas wanti nuuf deebi'e hin jiru'' jedha.
Walga'icharratti namoonni gosa barnoota fayyaan walqabatu hunduu jechuun warri ekisteenshinootaa, Narsoonnii akkasumallee warri madiisinii baratan argamaniiru kan jedhu Dr.Sifeessaan nama hunduu gaaffii mataasaa kan achumatti deebii argachuu danda'an gaafatan, kunimmoo ajandaa nuti kaasuuf qabannee deemne jijjiireera jedha.
''Gaaffin keenya ijoon sirni fayyaa biyyattii dulloomaa fi hojimaata badaadhaan laaqame guutummaatti irra deebiin akka haaromuudha. Kun garuu akka ajandaa guddaatti walga'icharratti hin mul'anne."
"Warri ministira fayyaa hojjettootuma isaanii qindeessanii fidan. Isaan waa'eedhuma hojii guyyaa guyyaa isaanii mariyatan. Waa'een qabiinsa hojjettootaa, waa'een kaffaltii, waa'een imaammataa haalaan ka'ee irratti hin mari'atamne.'' jedha.
''Ministirri muummees deebii nuuf deebisa jennee yaadne nuuf hin deebisne. Inumaa numaan itti komatan. Xiyyeeffannaan addaa damee fayyaaf kennamee akka jirufaa nu barsiisan. Gabaasa hedduu jijjiiramuu sektara fayyaa agarsiisu nutti himan. Nuti garuu waan lafa ga'e hin agarre.'' jedha.
'Dawaa aadaa ammayyeessuun beeksisuun fedha'
Gaaffilee akka nageenyi keenya eegamuuf gaafanneef mootummaan addatti waan qaama nageenya isiniif ramadu hin qabu jedhamne jedha Dr.Sifeessaan.
''Walii gala waan nuuf deebi'a ture gaaffiin nuti gaafanne hedduunsaa waan humna mootummaa olii akka ta'ettidha.''
Yaada ministirri muummee kennan keessaa xiqqoo kan abdii qabu yoo jiraate waa'ee hirmaanaan baasii barnootaa(cost sharing) dha jedhu Dr. Sifeessaan.
''Wayita barannu naannoo qarshii 50,000 hin caalle fayyadamnee baanee wayita ragaa barnootaa keenya fudhachuuf gaafannu maallaqa walakkaa miiliyoonaa nu gaafatu.
Isa kana akka tajaajilaan baasii ofirraa xumurru waan gaariitti nutti himan. Ta'us garuu kunis duraan tureera.'' jedha.
Ammas gaaffiin dhimma imaammata fayyaa biyyattiirratti qaban akka hafee fi isas ta'e hiriyoota waliin hojjetan akka garaa hin geenye dubbata Dr.Sifeessaan.
''Imaammati fayyaa keenya kan ALA bara 1993 bocameedha. Hanga yoonaa keessa deebi'amee hin ilaalamne. Fooyya'iinsi hin godhamne. Imaammati yerosii ittisa dhibee(preventive method) irratti xiyyeeffateeti kan ba'e."
"Baajati guddaanis hojii akkasiif ramadama ture. Kun yeroo sanaaf sirrii ta'uu danda'a. Amma garuu warra miidhame, warra dhibamanii nu harka jiran yaaluuf xiyyeeffannaan kenname gar malee kan gadi bu'edha. Hospitaalonni magaalaa Finfinnee keessaa kan waggaa 50 duraati baay'een isaanii."
"Isaanumatu jira har'as. Homaa hin fooyyessine. Akkaataa addunyaa ammayyaatti of fooyyessaa deemuu hin dandeenye. Uummannimmoo fooyya'iinsa barbaada.''
Mootummaanillee gaafa waa'ee fayyaa dubbatu siyaasaaf jecha haalli kenniinsa fayyaa keenya jijjiirameera jedhu kan jedhu Dr.Sifeessaan garuu qabatamaan waan lafarra jiru argaa oolla waan ta'eef hanga inni sirratutti gaaffii keenya inuma gaafanna jedha.
Imaammata fayyaa jijjiiruun ammas gaaffii ijoo keenya ta'ee itti fufa jedha Dr. Sifeessaan.
Fayyaa: Hanqinni qoricha daranyoo sombaa Oromiyaatti yaaddoo uume
Gumaata Kaampaasii 14: Dawaa aadaa ammayyeessuun beeksisuun fedha
Yaalii fonqolchaafi baduu intarneetaarratti namoonni maal jedhu?